भारतमा एकै दिन ७५ जनाको मृत्यु, सार्क राष्ट्रमा कोरोना संक्रमित ६३ हजार पुग्यो ! – Sagarmatha Online News Portal
भारतमा एकै दिन ७५ जनाको मृत्यु, सार्क राष्ट्रमा कोरोना संक्रमित ६३ हजार पुग्यो !
काठमाडौं । विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइसर (कोभिड-१९)बाट दक्षिण एसियामा रहेको सार्क राष्ट्रहरुमा १ हजार ७ सय ७९ नागरिकको मृत्यु भएको छ । ६२ हजार ८ सय ९५ नागरिकमा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ ।
पछिल्लो २४ घण्टाभित्र भारतमा कोरोना भाइरस (कोभिड-१९)बाट ७५ जनाको मृत्यु भएको छ । विश्व व्यापी महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोरोना भारतमा पनि पछिल्लो समय भयावह रुपमा फैलिरहेको छ ।
सार्कको सबैभन्दा ठूलो राष्ट्र भारत कोरोनाबाट पनि सबैभन्दा बढि प्रभावित मुलुक बनेको छ । वलर््डओमिटर्स इन्फोका अनुसार, हालसम्म भारतमा १ हजार १ सय ५४ जनाको मृत्यु भएको छ । भने संक्रमितको संख्या ३५ हजार हजार ४३ जना पुगेको छ । उनीहरुमध्ये ९ हजार ६८ बिरामी निको भएर घर फर्किएका छन् । अझै २४ हजार ६ सय ४१ जना उपचाररत छन् । यो समाचार तयार पार्दासम्म १ सय ८० जना नयाँ संक्रिमित थपिएका छन् ।
सार्क राष्ट्रहरुमध्ये पाकिस्तान कोरोनाबाट दोस्रो बढि प्रभावित देश हो । पाकिस्तानमा हालसम्म १६ हजार ८ सय १७ जना कोरोना संक्रमित भएका छन् ।
हालसम्म पाकिस्तानमा ३ सय ८५ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । ४ हजार ३ सय १५ बिरामी निको भएर घर फर्किएका छन् । अझै १२ हजार १ सय १७ जना उपचाररत छन् । भने १ सय ११ जनाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भिर रहेको छ । यो समाचार तयार पार्दासम्म ३ सय ४४ जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्, भने २४ जनाले भर्खरै ज्यान गुमाएका छन् ।
बंगलादेशमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या १ सय ६८ जना पुगेको छ । हालसम्म बंगलादेशमा संक्रमितको संख्या ७ हजार ६ सय ६७ जना पुगेका छन् ।
यो रोगबाट १ सय ६० जना निको भएर घर फर्किएका छन् । अझै ७ हजार ३ सय ३९ जना उपचाररत छन् । भने, १ जनाको मात्र स्वास्थ्य अवस्था गम्भिर रहेको छ ।
अफगानिस्तानमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ६४ पुगेको छ । हालसम्म यो रोगबाट संक्रमितको संख्या भने २ हजार १ सय ७१ जना रहेका छन् ।
२ सय ६० जना निको भएर घर फर्किएका छन् । भने, अझै १ हजार ८ सय ४७ जना उपचाररत छन् । उनीहरुमध्ये ७ जनाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भिर रहेको छ ।
श्रीलंकामा कोरोनाबाट ७ जनाको ज्यान गएको छ । हालसम्म यो रोगबाट संक्रमितको संख्या ६ सय ६५ जना पुगेको छ ।
१ सय ५४ जना निको भएर घर फर्किएका छन् । अझै ५ सय ४ जना उपचाररत छन् । उनीहरुमध्ये १ जनाको मात्र स्वास्थ्य अवस्था गम्भिर रहेको छ ।
माल्दिभ्समा कोरोनाबाट अहिलेसम्म १ जना नागरिकको मात्र मृत्यु भएको छ । कोरोना संक्रमितको संख्या भने ४ सय ६८ जना पुगेको छ ।
यो प्राणघातक रोगबाट १७ जना निको भएर घर फर्किएका छन् । भने, अझै ४ सय ५० जना उपचाररत छन् । उनीहरुमध्ये २ जनाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भिर रहेको छ ।
कोरोनाबाट नेपालमा अहिलेसम्म कसैको ज्यान गएको छैन । हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमित ५७ जना पुगेको छ ।
अहिलेसम्म यो रोगबाट १६ जना निको भएर घर फर्किएका छन् । अझै ४१ जनाले नेपालका विभिन्न अस्पतालमा उपचार गराईरहेका छन् । पछिल्लो समय आशंका गरिएका सयौं बिरामीहरुमा कुनै व्यक्तिलाई कोरोना संक्रमण नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताले जानकारी दिए ।
सार्क राष्ट्रमध्ये सबैभन्दा कम कोरोना संक्रमितको संख्या भुटानमा रहेको छ । भुटानमा पनि अहिलेसम्म कोरोनाले कुनै नागरिकको मृत्यु भएको छैन ।
हालसम्म भुटानमा ७ जना मात्र कोरोना संक्रमित छन् । उनीहरुमध्ये ५ जना निको भएर घर फर्किएका छन्, भने २ जनाले उपचार गराईरहेका छन् । भुटानमा पनि पछिल्लो समय कोरोना आशंका गरिएका कुनै बिरामीहरुलाई संक्रमणको पुष्टि नभएको त्यहाँका सरकारी सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् ।